Gare routière Ambohimangakely : Tontosa hatramin’ny 65% ny asa fanamboarana -
AccueilRaharaham-pirenenaGare routière Ambohimangakely : Tontosa hatramin’ny 65% ny asa fanamboarana
01/02/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nisy fahatarana teo amin’ny telo herinandro mahery kely teo ny asa fanamboarana ny tobim-piantsonan’ny taksiborosy etsy Ambohimangakely (By-Pass). Voalaza fa vokatry ny fandalovan’ny rivodoza AVA farany teo no nampihatoana ny asa. Na izany aza anefa, dia tontosa efa hatramin’ny 65% ny asa fanamboarana sy fananganana izany, amin’izao fotoana izao.
Amin’ny maha tetikasan’ny Filoham-pirenena ity tobim-piantsonan’ny taksiborosy ity, dia nanao fitsidihana ifotony, nijery ny fandrosoan’ny asa ny minisitra eo anivon’ny Prezidansa misahana ny Tetikasan’ny Filoham-pirenena sy ny Fanajariana ny tany ary ny Fampitaovana (M2PATE), Benjamina Ramanantsoa, sy ny ekipany omaly. Tamin’izany indrindra no nitondran’ny tompon’andraikitra amin’ny fanamboarana ny mombamomba io fotodrafitrasa goavana io.
Araka izany, dia voalaza fa mirefy 28 000 m2 ny totalin’ny faritra misy ny fotodrafitrasa, izay 4 300 m2 kosa ny refin’ny tobim-piantsonan’ny taksiborosy. Izany hoe, roa avo heny noho ilay tobim-piantsonana vaovao vao notokanana teny Andohatapenaka ny velaran-tanin’izy ity. Ahitana biraon’ireo kaoperativam-pitaterana miisa 110, misy tsena miisa 22 sy birao miisa efatra, ary birao fakana tapakila miisa enina sy trano fisakafoana miisa roa miaraka amina lakozia miisa efatra. Ahitana trano fandraisana lehibe iray ihany koa, sns.
Tsy vitan’izay ihany fa ahitana tobin-tsolika lehibe Jovena ihany koa ao anatin’ity tobim-piantsonan’ny taksiborosy ity. Mahazaka fiara hatramin’ny 88 isa ho an’ny fiaingana, ary toerana ho an’ny fiara manala olona miisa 25. Miisa 25 toraka izay ihany koa ny toerana voatokana ho an’ireo mpitsidika sy ny taxi. Mitotaly 138 kosa izany ny toeram-piantsonana ao amin’ity tobim-piantsonan’ny taksiborosy ity.
Ankoatra izay, dia nanazava ny minisitry ny M2PATE, Benjamina Ramanantsoa, fa noho ny fiaraha-miasan’ny Fanjakana amin’ny tsy miankina (3P) no nahafahana niroso tamin’ny fananganana ity fotodrafitrasa goavana ity. Voalaza mantsy fa ny orinasa Jovena no miara-miasa amin’ny Fanjakana amin’ny famatsiam-bolan’ny fanamboarana sy fananganana, izay mitentina 6.5 miliara Ariary. Maharitra 30 taona kosa ny fiandraiketan’ny orinasa Jovena izany, izay nosoniavina ny 10 febroary 2016 ny fifanarahana.
Raha ny fanazavana hatrany, dia ny volana aogositra 2016 no nanombohan’ny asa fanamboarana ity tobim-piantsonan’ny taksiborosy eny Ambohimangakely ity, ary hifarana ny faran’ny volana marsa 2018 izao izany.
Nanazava hatrany ny minisitra Benjamina Ramanantsoa fa tobim-piantsonan’ny taksiborosy ho an’ireo Lalam-pirenena fahafito (RN7) sy faharoa (RN2), ary ireo taksiborosy rezionaly amin’ireo Lalam-pirenena roa ireo ity tobim-piantsonana lehibe ity.
Voalaza ihany koa fa ampanarahana ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny maha tobim-piantsonana azy ity eny Ambohimangakely ity. Izany dia tafiditra indrindra amin’ny paikadin’ny fitondram-panjakana amin’ny planin’ny fanajariana an’Antananarivo Renivohitra.
Rajoelina sy Ravalomanana : Hifamototra ?
Nifanatona tsimoramora ny ankolafy Ravalomanana sy Rajoelina, ka ny tanjona dia tokana ihany : “handrodana ny efa mijoro ankehitriny”. Io no vaovao farany, taorian’ny angom-baovao natao. Tsy levon’ny vavonin’ny ekipan-dRavalomanana Marc mihitsy ny fahombiazana lehibe ...Tohiny
Fampielezan-kevitry ny kandidà N° 25 : Hatomboka amin’ny fotoam-pivavahana